Musaanadabada Ciidul Fidriga oo lagu qabtay Wadanka Shiinaha (sawiro) – SBC
Musaanadabada Ciidul Fidriga oo lagu qabtay Wadanka Shiinaha (sawiro)
Munaasabada Ciideed ayaa lagu qabtey magaalada Wuhan ee Wadanka shiinaha, halkaasi oo ah gobolka U badan oo ardey Muslimiin ah oo ay u badan yihiin soomaali wax ka bartaan.
Waxaana Subixnimada talaadada lagu tukaday mid ka mid Hoteelada Magaalada wuhan halkaasi oo salaadii ay soo xaadireen Muslimiin u badan dhalin yaro kuwaasi oo jaamacadaha kala duwan ee Gobolka wax ka barta.
Waxayna ahayd Jawi aad u qurux badan oo dadku ay isugu marxabeynayeen CIID MUBAARAK…
Sidoo kale waxaa Maalinimadii Arbacada ee Maanta Xaflad balaaran lagu qabtey Hudheelka Dong Lai shuan ( Don laay shuwan ), waxaana ka soo qeyb galay qaar badan oo ka tirsan ardeyda soomaaliyeed intii joogtey magaalada maadaama ay xili fasaxeedkii ardeydu uga maqan yihiin wadanka .
Munaasabada ayaa waxaa hadala Qiimo badan oo waano iyo wacdiba isugu jira ka soo jeediyey qaar ka tirsan ardeyda iyo Waliba Dr. Mahadi Ciise iyo Dr. Amiin Maxamuud Xuseen (Amiin Dheere), sidoo kalena waxaa Munaasabada maanta yimid north America, isagoo maanta si weyn ardeyda Ugula dardaarmey munaasabadan uu nasiibka u yeeshay inuu kala qeyb galo .
Sidoo kale Gudoomiyaha ururka Dhaqaatiirta Da’da yare e Young Somali Docters (YSD) Mudane Cumar Cabdisamad ( Cumar shiino) ayaa isna hadala qiimo badan iyo barnaamijka ururka ee soo wajahan sanadkan ka soo jeediyey Madasha.
Ugu danbeyntiina Gudoomiyaha Guud ee Ardeyda Soomaaliyeed ee Jaamacadaha Magaalada wuhan Mohamed Abdirahman (Qooje) ayaa kusoo gunaanadey xafladii, Mahadcelin iyo Hambalyo Munaasabada Ciida iyo Hambalyo Maxamed Khayr oo ardeyda ka mid ah oo habeenimadii xalay wiil ugu dhashey magaalada.
Waxuuna sheegey Qooje in Maalinimada Jimacaha uu dhacayo Tartankii Quraanka kariimka ee sanadkasta ay qabtaan ardeyda soomaaliyeed
Guud ahaan waxay ahayd xaflada Maanta mid aad iyo aad u qiimo badneyd iyadoo Waanadii Dr. Mahdi iyo waliba Aabe Cabdi Ibraahim ay ardeyda aad ugu diirsadeen una soo dhaweeyeen.
Hadaba Daabo Sawirada Xafladaha Ciida ee China
Ali Mohamed Ali ( Baaba )